Sunday 9th September 2018 11:43:47 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Gargaar) Jamhuuriyadda Jabuuti oo muddo la jaanqaadi la'ayd dabaysha isbedel ee Geeska Africa uga curatay habka togan ayaa ugu dambeyn Khamiistii
Hargeysa(Gargaar) Jamhuuriyadda Jabuuti oo muddo la jaanqaadi la'ayd dabaysha isbedel ee Geeska Africa uga curatay habka togan ayaa ugu dambeyn Khamiistii dacalka ka raacday dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Ereteriya oo wanaag ku bedelay cilaaqaadkooda oo muddo dheer colaad iyo cunfi ku salaysna. Hase ahaatee Jamhuuriyadda Somaliland wali raad kuma yeelan isbedellada socda.
Guddoomiyaha Komishanka Midawga Afrika Muusa Faki Maxamed ayaa heshiisyada dhexmaray dalalka Jabuuti iyo Ereteriya ku tilmaamay mushkiladdii Africa oo ay xallinayaan hoggaamiyeyaasha Geeska Africa laakiin, wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf wuxuu si weyn ugu mahadceliyay dawladda Boqortooyada Sucuudiga oo uu sheegay in ay hormuud u ahayd isu soo dhawaanshaha Asmara iyo Jabuuti.
Wasiir Maxamuud Cali Yuusuf wuxuu sheegay in socdaal uu dhawaan wasiirka arrimaha dibadda Sucuudigu ku tagay Asmara iyo Addis Ababa wax weyn ka taray isu soo dhawaanshaha Ereteriya iyo Jabuuti. Waxa uu sheegay in Boqortooyada Sucuudigu door muhiim ah ka ciyaartay taageeridda sidii dalalka Geeska Africa khilaafyadooda hab nabad ah ugu dhammaysan lahaayeen, islamarkaana ay ka shaqaysay sidii dalalka Khaliijka iyo waddamada Geeska Africa danahooda guud u wada ilaashan lahaayeen iyaga oo ah bahwadaag dhanka ammaanka ah.
Wasiirka Jabuuti oo ku dheeraaday ammaanka Boqortooyada Sucuudiga iyo sida ay u danaynayaan in Badda Cas iyo marinnada badda la iska kaashado ammaankooda waxa kale oo uu sheegay in ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed abuuray jawi lagaga wada hadli karo nabadda Geeska. Waxa kale oo uu sheegay in Soomaaliya door ka qaadatay dhexdhexaadinta Ereteriya iyo Jabuuti si loo helo Geeska Africa oo aan dalna ka maqnayn.
Farriimahan uu boggiisa Twitter-ka ku faafiyay wasiir Maxamuud Cali Yuusuf wuxuu ku soo gabagabeeyay in Geeska Africa u dhaqaaqay horumarka, isku xidhnaanta, ammaanka iyo walaalnimada.
Geesta kale isbedellada socda awgeed dalka Ereteriya waxa uu todobaadka dambe dib ugu mid noqonaya dalalka Bariga Africa ee ku bahoobay IGAD. Ereteriya waxay ka baxday ururka 2007 iyada oo 2011 mar kale ku soo noqotay laakiin, waxa xubinimada laga joojiyay 2017. Soo laabashada ayaa qayb ka ah xidhiidhka togan ee dalalka Geeska dhexmaray.
Somaliland oo aan ka muuqan Geeska Afrika
Iyada oo ay muddooyinkii u dambeeyay socdeen aragtiyo ku saabsan in siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland fashil tahay waxa sii hafiyay isbedellada Geeska Africa ka socda. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa ku celceliyay in ay soo dhawaynayaan isbedel wanaagsan oo gobolka ka dhaca laakiin, Somaliland waxay u aragta in aanay marnaba Soomaaliya hadh u jiidayn waxaana xusid mudan in Soomaaliya fadhido miiska hoggaamiyeyaasha Geeska Africa ku hagayaan isbedelka ka socda Gobolka lamana oga in ay isbedelka ay wadaan qayb ka noqon doono dhexdhexaadinta Somaliland iyo Soomaaliya. Haddii aanay isu xil qaamin dhexdhexaadinta waxa loo arka in Somaliland ku sii jirayso gadoonka inkasta oo ay galaangal la leedahay xulufada Sucuudiga iyo Imaaraadka oo la fahansan yahay in ay door weyn ku leeyihiin isbedelka Gobolka.
Wada hadallada Somaliland iyo Somalia oo dalal Africa ka baxsan hore ugu hawlanayeen wuxuu dhawaan sheegay wasiir Sacad Cali Shire in heshiiska Imaaraadka iyo Somaliland ee dekedda Berbera iyo Saldhiggu meesha ka saaray jawi lagu sii wada hadli karo.